AutoSEO vs. FullSEO - Izay Serivisy SEO SEO no tsara indrindra ho anao
Noho izany, dia nandray ny fanapaha-kevitra hendry ianao hitrandraka sy hampiasa ny serivisy SEO an'ny orinasa Semalt?
Noho ny fanapahan-kevitra noraisinao dia hiditra atsy ho atsy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana tsy mitsaha-mitombo hatrany ianao izay nahazo tombony tamin'ny serivisy ara-barotra digital. Saingy miaraka amin'io fanapahan-kevitra io ny andraikitra lehibe kokoa amin'ny fisafidianana ny serivisy tsara. Iray izay mety ho anao ary mifanaraka amin'ny zavatra takinao manokana sy ny tanjon'ny orinasa.
Raha te-hanatsara ny fampisehoana SEO amin'ny tranokalanao ianao, dia manome fonosana roa an-tsokosoko ny Semalt: AutoSEO sy FullSEO.
Na dia mety efa manana fahalalana marina momba izay nampidirina tao amin'ireo fonosana roa ireto aza ianao, dia mbola afaka misy toerana hisalasalana sy fanontaniana. Raha toa ianao ka vao manomboka amin'ny sehatry ny SEO, dia mila fanazavana bebe kokoa no ilaina.
Noho izany, anio dia maka fotoana isika hampitahainay ny fonosana SEO lafo vidy roa. Aorian'ny fandalinana ity tatitra fampitahana haingana ity dia ho afaka misafidy ny fonosana izay mety amin'ny orinasanao ianao.
AutoSEO sy FullSEO - serivisy SEO an'ny Semalt
Andao atombohy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fonosana. Raha samy mikendry ny fandraharahana izy roa samy hafa, misy ny fiovan'ny sakelika anaty fonosana tsirairay. Ity fizarana ity dia hanome fampahalalana bebe kokoa momba ireo fahasamihafana ireo.
Inona no atao hoe AutoSEO?
AutoSEO by Semalt dia fonosana 'feno trano' izay manarona ny fiasa farany momba ny fikarohana optimization (SEO) fikarohana farany sy manelanelana indrindra ho an'ny orinasan-tserasera. Mandefa fanentanana SEO ho an'ny tranokalanao izy ary manao hetsika an-tsary sy off-pejy maromaro hanamafisana ny fahatongavanao ao amin'ny organik.
Manana tranonkala iray tsy hita amin'ny fisafidianana voajanahary Google ianao? Ny AutoSEO dia afaka manondro anao ny fomba iray anaovana ny hetsika fanaingoana tena ilaina. Ny sasany amin'izy ireo dia voatanisa eto ambany:
Fikarohana teny fanalahidy - Fandinihana ny orinasanao, indostria ary tranokalanao hiteraka lisitr'ireo teny manan-danja, izany hoe ny fanontaniana tadiavin'ny mpanjifa mety ho anao ao amin'ny milina fikarohana toa an'i Google na Bing. Ity no iray amin'ireo singa lehibe indrindra amin'ny SEO
On-Page Optimization - Fametrahana ny teny fanalahidy mety ao anatin'ny atiny isaky ny pejin'ny tranonkalanao ary koa ny fijerena ireo singa ao amin'ny pejy hafa toy ny lohateny, famaritana meta, ary sarin'ny alt image.
Rindran- tranonkala rohy - fantatra koa amin'ny hoe optimization off-page dia misy ny famokarana sy ny fanaparitahana ny votoaty mifandraika amin'ny tranokala hafa ary ny fahazoana rohy miverina any amin'ny sehatra misy anao. Manatsara ny hasarobidin'ny SEO (domain fahefana, amin'ny ankapobeny) ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fitantanana ny ranona SEO avy any amin'ireo tranokala ireo
Web Analytics - famerenana isan-kerinandro, isan-kerinandro, isam-bolana ary isam-bolana ny anaran'ny tranokala analys mba hahafantarana ny metaly isan-karazany toy ny fifamoivoizana, ny fiovam-po ary ny fidirana an-tsegna avy amin'ny mpitsidika anao.
Ny AutoSEO dia manamboatra ny ankamaroan'ireto hetsika ireto ary manome anao tolotra SEO mavitrika izay mikendry ny hampivoatra ny sainao amin'ny ankapobeny ianao.
Sary 1 - Ny fanombanana ny angona data mpikaroka dia ampahany lehibe amin'ny SEO (AutoSEO no manome azy)
Endri-javatra iray mampiavaka ny AutoSEO amin'ny FullSEO dia ny valin'ny taloha dia manome valiny haingana. Raha manana orinasa niche ianao ary matoky ny fifaninanana ambany amin'ny Internet, dia afaka mahazo anao ny AutoSEO ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Amin'ny ankapobeny, SEO matetika dia maharitra volana maromaro amin'ny fiantraikany tsara. Na izany aza, tokony ho nahatsikaritra fa hanao fanadihadiana mialoha ny Semalt hahalalanao ny haingana ny vokatra azo. Ny famakafakana amin'ny antsipirihany sy ny fifanakalozan-dresaka manaraka miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa dia afaka manampy anao hanatratra fivoarana somary henjana.
Amin'ity lafiny ity, tonga lafatra ny AutoSEO amin'ireto karazana mpampiasa ireto:
Mpandraharaha mitady fanohanana SEO ho an'ny orinasan-dry zareo an-tserasera
Mpitoraka bilaogy sy mpanoratra mikendry ny hisarika ny fifamoivoizana / mpamaky
Mpitaitra sy olo-malaza amin'ny Internet
Raiso ny ohatra ataon'i Vaibhar Chaurasia ao amin'ny HealthKart izay nampiasa ny tolotra AutoSEO anay hanosika ny toeran'ny tranonkalany amin'ny Google India. Tao anatin'ny roa volana, nahafahanay nanatsara ny laharan'ny teny fanalahidy miiba izy. "Manoro hevitra mafy aho amin'ireo fiandohana sy orinasam-pifandraisana izay mijaly noho ny toerana ambany sy ny fahitana amin'ny tsy vitan'ny tranonkalany," hoy i Chaurasia izay nanoro hevitra an'i Semalt ho any am-piandohana, orinasam-barotra ary MSMEs rehetra maneran-tany.
Ny AutoSEO dia ho safidy tsara raha vaovao amin'ny tontolon'ny SEO ianao (na marketing digital, amin'ny ankapobeny) na mitady vokatra haingana. Raha orinasa manomboka ianao izay te handray tombony haingana fa feno ny fipoahan'ny koronavirus dia hanoro hevitra ny AutoSEO.
Na izany aza, raha maharitra ela ny tanjonao ary maniry ny hanorina laza malaza amin'ny orinasanao amin'ny Internet ianao amin'ny alàlan'ny SEO, dia tokony hijery an'i FullSEO, ilay fonosana SEO A-to-Z SEO.
Inona no FullSEO?
Androany dia miantso ny tenany ho manam-pahaizana amin'ny SEO izy rehetra. Mety ho marina izany raha mihevitra ny hanatsara ny tranokalanao sy ny fanoratana votoaty ho fomba hahazoana vokatra fotsiny ianao. Raha ny tena izy dia ho fantatrao izany, lalina kokoa sy saro-pady ny SEO noho izany.
Mba hanana ezaka SEO mahomby amin'ny orinasanao izay mahazo anao fiovam-po tena izy (izany hoe mpanjifa tena izy) dia mila mihoatra ny fototra ianao. Ary eo no miditra amin'ilay sary i FullSEO avy amin'i Semalt .
Ny lozisialy efa mandroso amin'ny AutoSEO, ity fonosana ity dia manome anao izay rehetra ilainao amin'ny fampielezan-kevitra SEO. Avy amin'ny fikarohana ny teny fanalahidy mankany amin'ny consulting, manana ny zava-drehetra ilain'ny orinasa ny fampivoarana ny fanatrehany amin'ny Internet ary hanamafy orina ny varotra azy. Izahay dia miresaka momba ny fivezivezena be dia be, ny lalana ary ny laza sy ny lazan'ny tranonkalanao eo amin'ireo mpiserasera.
Sary 2 - Ny fanohanan'ny mpanjifa dia iray amin'ireo manasongadina lehibe an'ny FullSEO raha ampitahaina amin'ny AutoSEO
Miaraka amin'ny FullSEO, mahita varotra sy tombony ary fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra misy olona ianao. Ny tombo-tsoa entinao manoloana anao sy ny orinasanao mandritra ny volana aman-taonany hitondranao ny fampielezan-kevitra FullSEO dia hanome anao valisoa maharitra. Fantatrao fa ny fananganana tranokala matanjaka miaraka amin'ny manam-pahefana ambony ankehitriny dia afaka mijinja tombontsoa ho anao mandritra ny taona sy taona ho avy.
Ity misy lisitr'ireo hetsika fanakianana azonao azonao ho fanampin'izay rehetra omen'ny AutoSEO:
Fijerena teknika tranonkala - fanatsofanana CMS, fanamarihana schema, fanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny pejy, sitemaps, ary fanaovana sonia GA / GTM. Fanaraha-maso feno ny tranokalanao dia homena miaraka amin'ny vahaolana manapaka izay be mpampiasa amin'ny orinasa SEO sy marketing.
Content - single rehetra afa-po fepetra - avy amin'ny tranonkala bilaogy ny haino aman-jery sosialy ho PR lahatsoratra fanentanana - ho ideated, nanoratra, ary navoaka ho an'ny fanatsarana ny tranonkala ny SEO sarobidy
Fifampidinihana - Raha vaovao amin'ny SEO ianao dia mila consultation momba ny fomba tsara indrindra. Ny fonosana FullSEO an'ny Semalt dia hanome anao soso-kevitra momba ny fandefasana votoaty, trika ary teknika mandroso toy ny snippets manankarena, ary hetsika isan-karazany izay azo antoka fa hanenona ny tranokalanao ho lasa pejy iray amin'ny motera fikarohana tianao.
Raha ny marina, miaraka amin'ny FullSEO ianao dia hahazo drafitra mifanaraka amin'ny orinasa an-tserasera izay mijery ilay sary lehibe. Mpilalao e-varotra vaovao ve ianao eo amin'ny indostria eo an-toerana efa feno tranokala ary tranokala efa niorina? FullSEO hanosika anao ambony eo ambonin'izy ireo amin'ny laharana an-tserasera.
Raiso ny ohatry ny orinasa e-varotra Zanvic, izay nanararaotra ny serivisy FullSEO Semalt ary nahavita nampitombo ny fivezivezena ara-organika tamin'ny alalàn'ny 500% tao anatin'ny fito volana latsaka. Tamin'ny fiafaran'ny enim-bolana voalohany ny fampielezan-kevitra, Semalt dia afaka nitondra mihoatra ny 150 amin'ireo teny fototra kendrena ao amin'ny valim-pitiliana ambony indrindra an'ny Google.
Miharihary fa tena manana sisiny ambony amin'ny AutoSEO i FullSEO ary mila fomba hentitra izy io. Saingy ahoana no ahafantaranao fa feno ho anao ny FullSEO na tsia?
Raha oharina dia atolotry FullSEO ho an'ireo mpandraharaha, fanombohana ara-bola be dia be, ary orinasa manantena ny hanelingelina ny indostrian'izy ireo.
Iza no tokony hofidinao?
Rehefa afaka manintona avy amin'ireo fizarana etsy ambony ianao dia mazava fa ny AutoSEO dia fonosana SEO starter izay manana hetsika voafetra ao anatin'ny skaniny. Noho izany, tonga lafatra ho an'ny tsirairay sy ny fanombohana kely maniry vokatra haingana.
Etsy andaniny, Semalt dia manolotra ny FullSEO amin'ny orinasa sy tranokala e-varotra izay mila mieritreritra lehibe ary manatanteraka lehibe kokoa hahafahany mahita fahombiazana eo alohan'ny fifaninanana goavana.
Fampitahana ny AutoSEO sy FullSEO: Famintinana haingana
Fantatray fa mety ho sahirana ny sasany aminareo hanamboatra serivisy mandritra ny vanim-potoana fanakatonana. Ka eto misy famintinana vetivety miaraka amin'ny latabatra. Zahao ny tsy fitovian'ny fonosana SEO feno manerana ny tarehimarika.
Amin'izao fotoana izao dia tokony hanana hevitra marim-pototra momba ny safidinao ianao. Na ny AutoSEO sy FullSEO dia samy manana tombony manokana, azonao atao kosa ny misafidy izay sahaza anao indrindra.
Ho an'ny fanadihadiana voalohany momba ny tranonkalanao, mifandraisa aminay anio . Azonao atao ihany koa ny manomboka ny tolotra fitsapana AutoSEO amin'ny alàlan'ny tsindrio eto.